Ikhaya STARS E-EUROPE I-Kepa Ingane Yendaba Yobuningi Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba Ephelele yoMgcini Wezinhloso owaziwa kakhulu ngesidlaliso "The Master Bird". Indaba yethu yezingane ze-Kepa kanye ne-Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngokudubula kwakhe amakhono. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abheka i-Kepa's Bio ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
I-Kepa Childhood Story Plus Mahhala Untold Biography Facts -Ukuphila kwasekuqaleni kanye ne-Bird Affair
Ukuqala, uKapa Arrizabalaga Revuelta wazalwa ngo-3 Okthoba 1994 kubazali bakhe e-Ondarroa, edolobheni laseBasque elwandle eSpain.
UKepa wayeyilenta elibonakalayo kusukela esencane. Wenza, Nokho, ukulinganisela ibhola ngekhanda lokubili lokuzingela nokukhulisa izinyoni ayezenza noyise. Lapho uKepa engumntwana yena, kanye noyise, bezingela ama-goldenfinches (inyoni yaseNorth America ethanda ukufuduka) bese ibafundisa ukucula.
"Kusukela esemncane kakhulu uye wasiza uyise ukuba ahlanze amakheji futhi athathe igolide ehlathini,"
I-Kepa Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts-Ukuncintisana kwe-Spanish Bird
KwaseKepa, isenzo sezinyoni ezinothando sathatha uchwepheshe wezinto ezithinta uhambo phakathi kokudlala ibhola, ukuya esikoleni nokuba nethalente langempela lezinyoni zakhe eziyinqaba.
Uthi bewazi?... Izinyoni zikaKepa, ezithiwa Oker, Rocky noRaikkonen, Kwaphindwa kabili ukunqoba imincintiswano yezinyoni ze-Regional ku-2008 ne-2010 ngemuva kweqembu elithile labahluleli elinqume ukuthi izinyoni zakhe ziphawulekayo Oker babe nomsindo omuhle kakhulu. Kule minyaka (2008 no-2009), uKhapa wabizwa ngokuthi yi I-Songbirds Champion ye-Vizcaya. Kwakuyi-Oker, efanekiselwe ngezansi ukuthi inikeze ingoma edumile eyayinikeza iziqu zayo ezimbili.
Njengesikhathi sokubhala, kokubili Oker, Rocky noRaikkonen kukhona isasetshenziselwa ukuncintisana.
I-Kepa Childhood Story Plus Mahhala Untold Biography Facts -Isifinyezo somsebenzi
Manje sibuyela emuva emsebenzini wakhe owaqala edolobhaneni elincane lase-Ondarroa ezweni laseBasque. Uthando lwakhe lwebhola lubona ngesikhathi eneminyaka engu-6, ebhalisa iqembu lakhe lesikhathi esisha lendawo yentsha eyamnika isiteji ukukhombisa amakhono akhe.
Ngesishiyagalolunye, umxhwele ngokwanele lapho u-Athletic Bilbao uthola khona isignesha. Lokhu kwaba ngalesi sikhathi waqala ukuqeqesha izinyoni zegolide.
Ukuthuthuka kukaKepa ngokusebenzisa amaqembu ase-Athletic Bilbao kwakushesha. Emuva ngaleso sikhathi, ngezinye izikhathi wayekhipha phakathi kokulondoloza nokudlala ngaphakathi. UKepa wayaziwa ngokushaya amagoli ngesikhathi esadlala njengensiza ye-Athletico Bilbao ngaphansi kwe-14.
AUqale, ukucabanga kukaKepa nesivinini sakhe kwaqala ukuthakazelisa abaqeqeshi bakhe ababolekwe ngamakilabhu amabili (uPonradradina noValladolid) ngaphambi kokuba abuyele endaweni yokuqala e-Athletic Club.
Ukuze aveze ubufakazi obengeziwe bokuthuthukiswa kwakhe, uKapa Arrizabalaga wathola isigwebo esingu-£ 71.6 million sokukhishwa esasikhokhelwa yi-Chelsea ngo-8th ka-Agasti, i-2018 eholela kuKepa ibe ngumdlali oyinhloko kakhulu emhlabeni ngemuva kweLiverpool's Alisson Becker ngubani owathengwa ewindini elifanayo lokudlulisa ihlobo le-2018.
Njengesikhathi sokubhala, uhambo lukaKapa lwaseLondon aluzange lubone ukuthatha izinyoni zakhe. Esikhundleni sokwenza inyoni yakhe ihlabelele, abalandeli be-Chelsea manje bahlabelela igama lakhe.
I-Kepa Childhood Story Plus Mahhala Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Ngaphambi kwayo yonke indoda enhle, kukhona owesifazane omkhulu, noma kunjalo inkulumo iya. Futhi ngemuva kwawo wonke umuntu ophumelelayo waseSpain Footballer, kukhona ugqozi noma intombi enhle kakhulu njengoba kubonakala ku-Andrea Perez oboniswa ngezansi nesoka lakhe, uKepa.
Njengesikhathi sokubhala, kuncane kakhulu okwaziwa ngobuhle be-brunette. Imithombo yembula i-Andrea shies ekukhanyeni kwezindaba zomphakathi eziye zagcina i-akhawunti yakhe siqu kwimodi yangasese. Kodwa-ke, uKhapa uvame ukuthumela ama-duo ku-akhawunti yakhe ye-Instagram. I-snaps ekhonjisiwe ngezansi kwenzeka ngesikhathi sokulala kwabo eMexico.
I-Kepa Childhood Story Plus Mahhala Untold Biography Facts -Ukuhluleka kweZidane
Uthi bewazi?… UKepa usondele ukujoyina i-Real Madrid. Ngokweziningi Zidane Abagxekayo, kwaba ukunganaki kwakhe okwenzanga ukwenza lokhu kufezeke.
Lokhu kulandela iphephandaba laseSpain elidumile kakhulu Marca, Zidane wayengekho okuhle mayelana nokuthengwa kukaKepa ngemuva kokuphawula ukuthi uKepa ube nokulimala kanzima okwesaba ukuthi kuzosithinta ukudluliselwa. Ngemuva kokuba abaqondisi beqembu leMadrid bavunyelwe ukuhamba, Zidane usenqatshelwe ukuvotela umgcini we-Athletic Bilbao ku-window ye-2018 yokudlulisa ngoJanuwari. Ngokuvumelana ne Zidane...
"Okwamanje asidingi umgcini wezinhloso. Kamuva ngoJuni uma kunezinguquko, uma sihlala phansi futhi sikhuluma, mhlawumbe kuzoba nesidingo sokuthenga kwezinye izindawo, "
Utshele ingqungquthela yabezindaba. Ngemva kokuzwa ZidaneAmazwi kaKepa, ayevumelene namathimba athile neReal Madrid enqume ukushintsha ingqondo yakhe. Lokhu kwakuyiphutha elihlehlisiwe Zidane ngaphambi kokuba enze isinqumo sokuphuma esiqhingini saseSpain.
Ukudluliselwa kweKepa kwakungamaphesenti angu-£ 18 lapho ukukhishwa kweMadrid kwenzeka. UKepa ngaphambi kokulahlwa usuke wadlulisela udokotela ngaphambi kokuba lowo owayenguMenenja waseMadrid wathi cha.
Kepa Arrizabalaga Childhood Indaba Plus Untold Biography Imininingwane -Isigaba sokukhishwa
Manje sikutshela ukuthi kungani u-Chelsea akhokhela imali eminingi kakhulu ngeKepa.
UZidane waqhubeka etshela uKepa ukuthi uma efuna ukubasayina kumele asebenze ngokusheshayo okusho ukuthi uyaphambana nesikhathi sakhe sokwelapha ukuze alulame. Lokhu kushiye uKepa ukukala amathuba akhe. Ngesikhathi esifanayo, u-Athletic, ebona ukungaqiniseki emoyeni, wabuyela emuva wamnikeza ukuthengiswa okuthuthukisiwe okwenze ukuba abe nesigwebo esicindezelekile esithathwa yi-Chelsea namuhla.
Ukuvuselelwa kwenkontileka kaKepa ne-Athletic kubona isigaba esisha sokukhululwa esasuka ku-£ 18m kuya ku-£ 71m. U-Chelsea waqhubeka akhokhela imali.
I-Kepa Childhood Story Plus Mahhala Untold Biography Facts -Ubuntu bomsebenzi
I-football pundits iqhathanise uKapa nomdlali wezinyawo waseSpain, u-Iker Casillas. Noma kunjalo, uKepa ubude kakhulu kunomdlali wegoli waseMadrid. U-Kepa umi ngezinyawo ze-6 futhi unama-inches amane emfushane kunaleyo Thibaut Courtois.
UMaurizio Sarri usayine uKepa ngoba uyambona njengomuntu okhululekile ngebhola ezinyaweni ezihambisana nesitayela sakhe esiyinkimbinkimbi. Khumbula, uKapa wadlala phakathi nendawo yezinsimu phakathi nezinsuku ze-14.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Kepa Childhood kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.